ပုဇွန်သေစေသော တော်သလင်းနေသည် ကျွန်တော့်အား ကောင်းစွာဒုက္ခပေး နေတော့၏။အကြိုအကြားများပါမကျန် ဒရစပ်ထွက်နေသော ချွေးတို့ဖြင့် ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံးမှာ ရွှဲနစ်နေတော့သည်။
ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတခုလုံးမှာလည်း ရှိမှရှိပါသေးရဲ့လားဟု ထင်မှတ်များလောက်အောင်ပင် ထုံကျင်နေတော့၏။
ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ပျက်နေပုံကိုလည်း ကြည့်လေ။
အမိုးအကာမပါသော တီအီး ၁၁ ကားကြီး၏ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဒူးနှစ်ဘက်ထောက် နဖူးနှင့် ကြမ်းပြင်ထိထားပြီး လက်နှစ်ချောင်းကို ယှက်ကာ နောက်စေ့ပေါ်သို့ တင်ထားရလေသည်။
ရုပ်ရှင်ကားများတွင် စစ်သုံ့ပန်းများအား ဖမ်းဆီးပုံနှင့် တူလွန်းလှပါတော့ဘိ။
မိမိတို့သည် သူပုန်လည်းမဟုတ် ဓားပြလည်းမဟုတ်ပါပဲလျက် အဘယ့်ကြောင့် ဤသို.ဤနှယ် လူ့တန်ဘိုးကို လျစ်လျုရှုသော ဖမ်းဆီးနည်းကို အသုံးပြုမှန်း နားမလည်နိင် ဖြစ်ရလေသည်။ပတ်ဝန်းကျင်က မိမိတို့အား မမြင်စေလို၍ ဟုဆိုရပြန် ကလည်း ကျွန်တော်တို့အား ဖမ်းဆီးစဉ် ကာလကပင် ၀ိုင်းအုံကြည့်ရှုနေသော လူအုပ်ကြီးမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားတပေါင်းပွဲတော် တမျှစည်ကားနေပေးရာဤအချက်သည် မဖြစ်နိင်ပါချေ။ သို့ဆိုလျှင် မိမိတို့အား မည်သည့်နေရာ ကို ခေါ်သွားမှန်း မသိစေလို၍သာ ဖြစ်ပေမည်။
Read more: ဆိုင်ကယ်လှလှလေးတွေ...
၁၉၈၈ ခုနှစ်သည် အရေးတော်ပုံနှစ်ဟု ဆိုရမလောက်ပင် အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သော အရေးအခင်းများသည် တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့လေသည်။
မောင်ဘုန်းမော် အရေးအခင်းဟု အမည်တွင်ခဲ့သည့် မတ်ခ်ျလ လှုပ်ရှားမှု
ဂျင်ဂလိပွဲတော်ဟု ကင်ပွန်းတပ်ခံခဲ့ရသည့် ဇွန်လအရေးအခင်း
ရှစ်လေးလုံး ဟု ကျော်ကြားခဲ့သော သြဂုတ်လ အရေးအခင်း၊ ထိုသည်၏နောက် တစ်နိင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အုံကြွလှုပ်ရှားခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံတို့ပင်တည်း။
Read more: စကားလက်မွန်
ဒီဇင်ဘာ ခရစ်စမတ် မတိုင်မီ ရက်ပိုင်းတွင် အင်္ဂလန် ပြည် တောင်ပိုင်း ၌ အအေးဓါတ် လွန်ကဲပြီး နှင်း ထူထပ်စွာ ကျလိမ့်မည် ဟု မိုးလေ၀သ ဌာနမှ ကြေငြာ ပါသည်။ ရုရှားပြည် ဆိုက်ဘေးရီးယားအရပ်က တိုက်ခတ်လာမည့် ဆောင်းလေကြောင့် ယခုနှစ်တွင် အအေး ပိုလိမ့်မည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ သူတို. ကြေငြာချက်မှာ အများအားဖြင့် တိကျ မှန်ကန် တတ်သည့် အတိုင်း နှင်းတွေလည်း တကယ်ကျပါသည်။ သို.သော် သူတို. ပြောထားသလို အင်္ဂလန် တောင်ပိုင်း နှင့် လန်ဒန်မှာသာ မကဘဲ ဝေလနယ် တောင်ပိုင်း (South Wales) တွင်ပါ နှင်းတွေ အများကြီး ကျပါသည်။ ဝေလနယ်တွင် နေသော ကျွန်တော်တို.မှာ ဒို.ဆီမှာ နှင်းမကျပါဘူး ဟုတ် စိတ်ချပြီး အိပ်ရာဝင်ကြပါသည်။ သို.သော် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက် နံနက်ခင်း အိပ်ရာထချိန်တွင် ခါတိုင်းထက် လင်းထိန်နေသဖြင့် အခန်းဆီး ဆွဲကြည့်လိုက်တော့မှ ပါတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး တစ်ခုလုံး နှင်းတွေ ဖုံးပြီး ဖြူဖွေးနေတာ တွေ.လိုက်ရပါသည်။ ကျွန်တော် တို. နေသော Abergavenny မြို.ကလေးအား ထူထဲသောနှင်းထုက လှပစွာ လွှမ်းခြုံ ထားလိုက်ပါတော့သည်။
[ မှတ်ချက် ။ ။ ဗမာပြည်မှာတုန်း က ဆီးနှင်း ဆိုသော စကား ၏ အဓိပ္ပါယ် ကို တစ်မျိုးသာ နားလည်ခဲ့သော်လည်း ဤ နိုင်ငံရောက်မှ အသုံးအနှုန်း အမျိုးမျိုးကို တိုး၍မှတ်သားရပါသည
ယခုလို ဂွမ်းဖတ်များကဲ့သို. အဖတ်လိုက် ဖြည်းဖြည်းငြင်သာ ကျပြီးမြေမှာ ပုံနေသောနှင်းကို (snow) ၊ ဂွမ်းဖတ်လောက် မရှိတရှိ မြေပေါ်ရောက်သည်နှင့် အရည်ပျော်သွားသော နှင်းကို (sleet) ၊ အရည် ပျော်ခါစ ခပ်မွှတ်မွှတ်နှင်းကိုတော့ (slush) ၊ ကားမောင်းနေရင်း ရုတ်တရက် ရှေ.မှာ အင်မတန်ထူသော မြူလုံးကြီး လာရိုက်သည်ကို (fog) ၊ နံနက်ခင်း သစ်ရွက်တွေပေါ်မှာ တင်နေသည့် နှင်းရည်စက်များကို ( dew) ၊ ရုတ်တရက် တဗြုံးဗြုံး ကျလာတတ်သော သာကူစေ့၊ ဇီးစေ့လောက်ရှိသည့် မိုးသီးများကို ( hailstones of frozen rain) ၊ နွေအခါ ခပ်ဝေးဝေး တောင်တွေ ရေကန်တွေ ပေါ်မှာ ခပ်မှေးမှေး ဖုန်းနေသည့် မြူကို (mist) စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်ပါသည်။ ]
Read more: နှင်းတွေဝေမှဖြင့်ကွယ်
ကြောက်မွှေးပါ ဇာဂနာ နဲ့ နှုတ် (၃)
(ကြောက်မွှေးပါ ဇာဂနာ နဲ့ နှုတ် >>>>>>> အပိုင်း (၁) (၂) (၃) >>>>>>> သို့)
ပြေးလု၊ (---) ဥ မှတ်ပါသည်။”
မြပုဏ္ဏမာ အဖွဲ့ ရယ်လို့ အောင်မြင် ကျော်ကြားလာပြီးနောက် ၁၉၈၈ ခု ဇန်န၀ါရီလ ပုသိမ်မြို့မှာ ပြည်ထောင်စု အလံတော် ကြိုဆိုပွဲ စင်ပေါ်ကနေ လူရွှင်တော် အရိုင်းက ရာဇ၀တ်အိုးကို တုတ်နဲ့ ထိုးချလိုက်သဗျ။ သိကြတဲ့အတိုင်း အဲဒီခေတ်က “ပြည်ထောင်စုနေ့” ဆိုတာကြီးက ကျိုက္ကဆံကွင်းထဲမှာ ၀န်ကြီးဌာန ပြခန်းတွေ၊ ပြည်နယ်နဲ့ ပြခန်းတွေနဲ့ အကြီးအကျယ် လုပ်ပြီး ဗိုလ်နေ၀င်းက နိုင်ငံရေး မျက်လှည့်ပြပွဲကြီး လုပ်တာကိုး။ ဇန်န၀ါရီလလောက်ကတည်းက စပြီး အဲဒီ ပြည်ထောင်စုအလံ ဆိုတဲ့ဟာက အိုလံပစ် မီးရှူးတိုင် လှည့်သလို ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကို လှည့်တာကိုး။ အလံ ညအိပ်တဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာလည်း ပွဲကြီးတွေခံပြီး နေ့စဉ် သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးတွေမှာက ဒါပဲ ပုံကြီးတွေချဲ့ပြီး ဖေါ်ပြနေတာ။
Read more: ကြောက်မွှေးပါ ဇာဂနာ နဲ့ နှုတ် (၃)
Written by ကာတွန်း ဦးဖေသိန်း
Read more: ရှစ်လေးလုံး အရေးအခင်း
ကြောက်မွှေးပါ ဇာဂနာ နဲ့ နှုတ် (၂)
ကြောက်မွှေးပါ ဇာဂနာ နဲ့ နှုတ်